Uluhlu Lomlambo kwiGalofu? (Nokuba Ungayifaka njani enye)
Kwaye kunye neziseko zokubetha lolu hlobo olukhethekileyo lokudubula
Umtsalane, owaziwa ngokuba yi-lob shot, ngumdlalo omfutshane wokudubula odlalwa ngecala eliphezulu kakhulu ukuze udale ukuphakama okuphezulu kwindlela yokudlala ibhola. Injongo kukuthumela ibhola yegalufu kwi-high-arcing trajectory, ngokukhawuleza kwaye iphantsi, ukwenzela ukuba xa ihamba kwindawo eluhlaza ityeka ngokukhawuleza, inomqolo omncinci.
Umtsalane we-flop yinto ekhethekileyo edutshulwa kwigalofu, edlalwa ngokubanzi ukwenzela ukuba ibhola ibe yingozi (njengobuncwane) phakathi kwe-golfer kunye ne-flagstick; okanye ukususela kuphela eluhlaza xa i-golfer isecaleni elifutshane kwaye idinga ibhola ukuba imise ngokukhawuleza kwangoko kuluhlaza.
Naliphi na ixesha ibhola yegalufu isesikweni apho i-golfer ifuna ukufumana ibhola emoyeni ngokukhawuleza kwi-trajectory, uze ubenze ibhola ibe yincinci eluhlaza, i-flop shot inokukhetha ukudlala.
Ibhola lokudlala lidlalwa ngokugqithisileyo ebizwa ngokuba yi-lob. I-lobge ye-lobge ine-degrees-60 ukuya kuma-64 e- loft kwaye ekuqaleni yayidalwa ngokukodwa ukudlala i-lobs, aka flops. Umdlalo wokudlala ungadlala kunye namanye amacangco xa i-golfer ibonisa i- clubface ebanzi evulekile ukuze ungeze loft, kodwa i-lob wedge yiklabhu efanelekileyo.
I-Technique yokudlala umbhobho we-Flop / Lob Shot
Ukuze ufumane inkcazo epheleleyo yendlela yokudubula, jonga indlela odlala ngayo umbhobho we-Flop Shotta Sorenstam. Kodwa, shwa nkathela uqeqesho lwe-Sorenstam, iisiseko zezi:
Vula ubuso bendawo yakho ukuze ukwandise i-loft ngakumbi.
Misa ibhola yegalufu phambili ngakumbi kwiimeko zakho eziqhelekileyo.
Nceda umzimba wakho ophezulu ekujoliswe kuyo kodwa uvule isimo sakho (ngoko iinyawo zakho zihambelaniswe ngakwesobunxele bebhegethi ye-hander-right).
Beka kwiibhola zeenyawo zakho kunye nobunzima obuncinane kwinqanaba lakho langaphambili.
Guqa amadolo akho ngaphezu koqhelekileyo.
Yenza i-swing epheleleyo, ugcine uthuli lomzimba ophantsi uze uvumele iingalo zakho nezandla zibe ngumsebenzi omningi.
Uguquka ukuya ekupheleni ngokupheleleyo.
Yiyo yokuguquka ngokukhawuleza, ukukhawuleza kwimpembelelo, eyenza ukuba i-flop shots inselele kwiindawo ezininzi zokugcoba.
Ekubeni imifanekiso emfutshane kakhulu - iiyari ezingama-50, iiyadhi ezingama-30, ukususela nje kuphela eluhlaza-kunokuba lula ukuhlaziya okanye ukuhluleka ukuzibophelela ngokupheleleyo kwi-swing. Yaye ukuba uyayifumanisa , ibhola lingase ibhawule ithagethi yindlela ende.
Unokufumana iikholeji ezininzi zevidiyo zokudlala ibhola le-flop kwi-YouTube, kuquka oku:
Indlela yokubetha ibhola yefologi
UPhilip Mickelson: Ukubetha i-lob hotshisa ubuxoki obuqinileyo
UDave Pelz: Lob uphendulela iziseko
Graeme McDowell's flop isifundo shot
U-Mickelson okhankanywe ngentla, ngokukhethekileyo, udumiwe ngenxa yokutshiza kwakhe.
Indawo ekulungeleyo kwiVolleyball
Indlela yokudlala iFomathi yeGalati eguquliwe
Indlela yokuLawula ubukhulu ngesibhayisiki
Izikolo zeGalofu zisebenza njani?
IFleet White White: USS Nebraska (BB-14)
I-Chemistry yamanzi anzima kunye neeSoft
Izizathu zokukhetha iBhizinisi elikhulu
Indlela yokubeka iibhanti zezimoto
Uqoqosho lwe-US lwama-1960 no-1970
I-Metal Metal yayifumana njani igama layo?
Indlela yokucela isenzo ngeQela elizibandakanya
Isifundo soLwimi lweNgesi eJapan